Ciidamo ka socda Puntland oo gaaray Gaalkacyo si ay uga bilaabaan howlgalo nabadgelyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamo ka socda Puntland oo gaaray Gaalkacyo si ay uga bilaabaan howlgalo nabadgelyo
Ciidamada ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray Gaalkacyo. [Isha Sawirka: Facebook]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamo ka socda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug si ay halkaas uga bilaabaan howlgalo nabadgelyo, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka Daraawiishta.
“Maanta oo bishu tahay 28-ka Febaraayo waxaanu u nimid magaalada Gaalkacyo howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka,” ayuu yiri Cabdishakuur Cabdullaahi Xuseen, taliyaha ciidanka Daraawiishta.
Dad looga shaki qabo in ay ka dambeeyeen falkaas foosha xun ee ka dhanka ahaa gabadha yarta ah ayaa ciidamada ammaanku soo qabteen.
Kufsiga iyo dilka loo geystay Caasho ayaa caro weyn ka dhaliyay gudaha deegaanada Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. Waxaana lagu baaqay in cadaalada la horkeeno dambiilayaashii falkaas naxdinta leh geystay.